Bọchị: Machị 18, 2020
Coronavirus Panic na Marmaray!
Anya ghọrọ ntụgharị njem ọha na eze n'ihi coronavirus, nke pụtara na China ma kpatara oke egwu n'ụwa niile. Dika ozi nke onye nta akuko Mevlüt Yüksel nwetara, Corona virus ahụrụ egwu na Marmaray Söğütlüçeşme Station. [More ...]
Onu ogugu ndi mmadu jiri Usinggbọ njem ọha na İzmir belata 51,3 pasent
Ewezuga na ekwesighi ime ya na Izmir, ọkpụkpọ ịghara ịpụ achọpụtala ọnọdụ ya. Dabere na data EZOT General Directorate, ọnụ ọgụgụ ndị na-eji ụgbọ njem ọha agbadawo pasent 51,3. Dọ aka ná ntị a na-enweta n'ime oke nke ịlụso iyi iyi coronovirus ọgụ dị na İzmir. [More ...]
Elmalı Bus Terminal Na-Ewute n'ike n'ike
Stationlọ ọdụ ụgbọ ala ọhụrụ ahụ nke Antalya Metropolitan Municipal nke dị na Elmalı wuru na mpaghara puku iri puku kubit iri na-abawanye ngwa ngwa. A na-arụ ọrụ na ala mbu nke arụmọrụ ọdụ ụgbọ ala, nke a rụchara ntọala ala ya na ala ya. Ọrụ kemgbe 10s [More ...]
Ugbo ala njem anakpo ndi oria na Mersin
Coronavirus-egosi mmetụta na gburugburu ụwa na Turkey (Covidien-19) megide ọrịa nke Mersin Metropolitan Municipality, na-eduzi ọmụmụ ihe niile nkeji kwesịrị ịnọgide na-amụ anya. Mepee ọha na eze site na nhicha nke ụgbọ njem ọha na-agwa ndị ọrụ banyere ọrịa ahụ [More ...]
A malitere mkpokọta nchekwa ọcha na mpaghara niile nke Gaziantep Obodo Ime Obodo iji gbochie nsogbu ahụike enwere ike. Maka igbochi oria Corona Virus (COVID-19), nke nwere otutu echiche banyere ụwa, [More ...]
Ugboro nke Disinfection mụbara na ugboala Havaist
Dabere na nkwupụta nke Havaist kwuru, Havaist nọgidere na-arụ ọrụ ya na ndị otu ya niile iji belata nchegbu na-akpata ọrịa na-abawanye na ọnwa oyi na karịsịa coronavirus Ndị njem na ọdụ ụgbọ elu Istanbul. [More ...]
Ndị njem Akçaray mụbara ruo nkeji iri
TransportationPark, otu n’ime ndị otu Kocaeli Metropolitan Municipality kwuputara na tram ga-agba nkeji iri ọbụla dịka nke taa (Wenezde). [More ...]
Njikọ Njikọ Acemler na-abanye na Bursa
Iji belata ibu nke Acemler Junction, ebe nkezi ụbọchị njem ụgbọ elu na Bursa dị karịa Ọdụdọ Istanbul July 15 Martyrs Bridge, Mudanya Junction İzmir okporo ụzọ jikọtara ogwe aka mepere okporo ụzọ ihe dịka ọnwa atọ gara aga. [More ...]
Ọmụmụ Ihe Nleba Anya nke Ọha n’egwuregwu Kachasị Elu
Asọmpi eserese '' Kachasị Esta Express '', nke a haziri ahazi na mba niile afọ abụọ gara aga, bụ nke enwetara na mba 2020 na mgbakwunye na Eastern Express, Van Lake Express na South Kurtalan. [More ...]
Ihe mgbochi Coronavirus na Sivas Yıldız Mountain Ski Center
A kwụsịtụrụ ọrụ nke Sivas Yıldız Mountain Winter Sports Tour Center Center nwa oge nwa oge n'ime oke nke usoro ndị agbasoro n'ihi coronavirus na-agbasa ngwa ngwa n'ụwa niile. Sivas Yıldız Mountain Winter Sports Tour Center Center ụdị coronavirus ọhụrụ (Kovid-19) [More ...]
Usoro Coronavirus na-aga n'ihu na Ọsọ zuru ezu na Samsun
Onye isi obodo nke Samsun Metropolitan Mustafa Demir kwusiri ike na ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị metụtara obodo ahụ na-emechi oge ụfọdụ n'ime oke nke usoro coronavirus, nke ghọworo ọrịa zuru ụwa ọnụ, 'Ka anyị na-agbaso usoro ahụ, ihe iyi egwu. [More ...]
Azụmahịa na Obere Taxi na Kocaeli
Obodo Kocaeli, nke na-aga n'ihu na-eme ihe megide ọrịa na-efe efe na-efe efe na azụmahịa na obere obere obodo mgbe ụgbọ ala na trams gasịrị. Workrụ ọrụ ọsọ ọsọ na nlebara anya [More ...]
Akçaray Tramways na-apụ kwa ụbọchị megide Nje Virus
TransportationPark, nke so na njikọ nke Kocaeli Metropolitan Obodo, anọwo na-akpachapụ anya n'ihi coronavirus agbasawo gburugburu ụwa n'oge na-adịbeghị anya, na-ahapụ ụmụ amaala ka ha nwee ike ịga ebe dị ọcha ma dị ọcha karị na tramway. N'ebe a, Akçaray [More ...]
RayHaber Ozi Ntanye 18.03.2020
Mersin Metro Construction and Vechable Tender Tender (Tender Cenderled) Ọrụ Ntanetị Elube Elu, nke includingzụrụ Ọgwụ Kemịkalụ N'etiti Mkpokọta Ahịhịa (TÜDEMSAŞ)
Dika ozi si n’obodo Bursa nke Obodo Bursa mara, eziokwu bu na ulo akwukwo bu ezumike, ufodu ulo oru ndi mmadu n’enye ndi oru ha oru, ma obu uzo eji aru oru ha agha ebilatala uzo njem ndi mmadu n’agha. 1 nde kwa ụbọchị [More ...]
Site na mkpebi nke Mịnịsta na-ahụ maka agụmakwụkwọ obodo, mgbe ọzụzụ ọzụzụ gachara n’agbata afọ 16-30 nke ọnwa Maachị, ndị njem na-agbadata na Metro, ANKARAY, Teleferik na EGO, ebe EGO General Directorate na-arụ ọrụ n'ụtụtụ na mgbede. [More ...]
Taa na Akụkọ ihe mere eme: 18 Mach 2017 1915 Çanakkale Bridge…
Ndị agha obodo jidere Geyve Strait 18, 1920, ụlọ mmiri na ọwara. E gbupụrụ ụzọ telifon nke na-enye nkwurịta okwu na ụzọ ụgbọ oloko. Pike gbara ndị njem na 18th nke Mach 1967 Anatolian Express, [More ...]